Wafdi Uu Hor Kacayey Raysalwasaare Kheyre Oo Adis Ababa Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyey.
Hay’adda Qaxootiga UNHCR oo sheegtey in kumanaan Million halis ugu jiraan in ay waddooyinka ku noolaadaan.
Gudoomiyihii Degmada Baledweyne oo Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabeele uu Xilkii ka Qaadey.
Bangi dhiiga lagu kaydiyo oo markii ugu horeysey laga hirgeliyey isbitaalka Laascaanood.
R/W Xasan Cali Khayre oo u Ambabaxey Dalka Switzerland Hawlo Shaqo Awgood iyo Shirar uu Lasoo Yeelanayo Madaxda Dalkaasi.
Ra’iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhaw oo maanta ah u anbabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaasoo uga qeyb galayo shirka dhaqaalaha adduunka. Kulanka ka furmaya magaalada Geneva ayaa waxaa ka qeyb geli doona Madax ka socota Qaraadda Afrika, waxaana si gaar ah looga hadli doonaa kobaca dhaqaalaha...
Abaaro sii baahaya oo Soomaaliya ka jira iyo gacanta adduunkoon waxba laga heyn.
Ayadoo wali abaar ba'an ay ka jirto gobolada dhexe ayaa haatan waxaa lagu soo waramayaa in biyo la'aan ba'an darteed dadka iyo duunyaduba ay geeri qarka u saaran yihiin deegaanka Kaxandhaale ee u dhexeeya Mudug iyo Galgaduud. Ceelasha ayaa waxaa ku jira biyo aad u yar oo dhiiqo miiran ah...
Suuqbacaad oo Caawa Dab Xoogan ka Qarxey/yaa ka danbeeya Dabka Suuqyada kusoo noq noqonaya?.
Dab xoogan oo goor dhaw ka dhacay Suuqa Bacaad degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, ayaa lagu waramayaa in uu ku sii fidayo goobo hor leh oo ka mid ah isla suuqa. Goob joogayaal ayaa sheegay in dabkan oo markii hore ka kacay qeybta dharka lagu iibiyo uu hadda ku sii...
Roobab iyo Dabaylo is wata oo Xoolo Gaaraya 2000 Dilay Xeebaha Badda cas ee Waqooyi bari Soomaaliya.
Roobabka iyo dableylaha is wata ee labadii cisho ee la dhaafay ku dhuftay deegaannada ku teedsan Gacanka Cadmeed gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya ayaa sababay burburka guryo badan ,iyadoona ay ku dhinteen ku dhawaad 2,000 oo xoolo ah, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay . Qaramad Midoobey ayaa sheegtay in roobabkan culus...
M/weynaha Maamul Goboleedka Jubaland oo Bogaadiyey Ciidamada La Dagaalamey Al-shabaab.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam oo tagay deegaanada Gosha oo ay howlgalka ka wadaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ku bogaadiyay ciidamada howlgalladooda ka dhnka ah Al-shabaab. Madaxweyne Axmed Madoobe oo booqday deegaannadii ay ka dhaceen dagaalladii ugu danbeeyay ee dhaxmaray ciidamada Jubbaland iyo Al-shabaab...
Labaatan qof oo ay sheegtey xukuumada soomaaliya in loo xir xirey qaraxii leysku dayey diyaaraddii Daallo airline.
Xukuumadda Somalia ayaa sheegtay in la soo xiray Dad ka badan 20-ruux oo lala Xiriirinayo Qaraxii Diyaaradda Daallo ka Talaadadii la soo dhaafay, iyadoo si Deg-deg ah ugu soo laabatay Garoonka Aadan Cadde oo ay markii hore ka duushay. Afhayeenka Xukuumadda Somalia, C/salaan Axmed Caato ayaa sheegay in ay...
Safiirkii Ruushka ee dalka Suudan Mirgayas Shirinskiy ayaa meydkiis laga helay barkada dabaasha ee qolkiisa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan maalintii Arbacada shalay, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska. Saraakiisha ayaa sheegay in markii ay arkeen arintan si deg deg ah goobta u soo gaareen dhaqaatiir caafimaad, kuwaa oo baaritaanno ku...
Dawlad Goboleedka Puntland oo Noqotey tii ugu Horeysey ee Gurmad Dawo soo Gaarsiisa Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah gar-gaar isugu jira daawo iyo dhakhaatiir caafimaad u diray magaalada Muqdisho si looga jawaabo gurmad Qaran oo laga bilaabay guud ahaan Somalia. Diyaarad khaas ah oo lagu soo guray agabyo caafimaad oo loogu tala-galay in lagula tacaalo xaalad-da caafimaad ee dadkii ku waxyeeloobay...
Boqorka Dalka Jordan iyo R/w-kuxigeenka Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya oo Kulan wada Yeeshay.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed oo ku sugan dalka Jordan ayaa kulan la qaatay boqorka dalkaasi, Boqor Cabdalla. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo boqorka dalka Jordan ayaa ka wada hadlay adkaynta xariirka labada dawladooda,iyadoo boqorka dalkaas uu boggaadiyay horumarka ballaaran iyo soo kabashada baaxadda leh ee Soomaaliya...
Jocob Zuma M/weynaha Koonfur Africa oo Cadaadis lagu saarayo in uu is Casillo.
Midowga ururrada shaqaalaha ee dalka Koonfur Afrika ugu awoodda badan ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi in uu xilka iskaga tago. Xoghayaha guud ee Cosatu, Bheki Ntshalintshali, ayaa sheegay in Madaxweyne Jocob Zuma uusan ahayn wixii iminka ka dambeeya qofkii ku haboonaa ee waddankaasi hogaamin lahaa. Dadkii ka soo qeyb qaatay dagaalkii...